दिवालियापन: torणी कम्पनीहरु बढ्छ 1,7% | अर्थव्यवस्था वित्त
पछिल्ला years बर्षमा त्यहाँ एक संवेदनशील भएपछि यस वर्षको पहिलो आधामा दिवालियापनमा सुधार आएको छ दिवालियापन प्रक्रियामा गिरावट। स्पेनिश अर्थव्यवस्थाको समष्टि आर्थिक डेटा केहि बिग्रँदो एक परिणाम को रूप मा। यद्यपि राम्रो समाचार यस तथ्यबाट आएको छ कि यस प्रकारको कानूनी कार्यवाहीहरू कम्पनीहरूको हितमा सफलतापूर्वक समाधान भइरहेको छ। तथ्या .्क भए पनि संख्याहरूले संकेत गर्दछ कि प्रवृत्तिमा परिवर्तन भइरहेको छ।
यस सामान्य परिप्रेक्षमा, दिवालिया debणीहरूको संख्या २०१ 1.648 को पहिलो त्रैमासिकमा १, reached2019 पुगेको छ, जसलेaलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ १.1,7% बृद्धि अघिल्लो वर्षको समान अवधिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सांख्यिकी संस्थान (आईएनई) ले यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकको लागि बैंकरप्सी प्रोसिजर स्ट्याटिस्टिक्स (ईपीसी) मार्फत संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार। प्रतिस्पर्धाको प्रकारले, १,1.558 स्वयम्सेवकहरू थिए (२०१ 2,1 को पहिलो क्वाटरमा २.१% बढी) र 2018 ० जना आवश्यक थिए (.90..5,3% कम)। प्रक्रियाको प्रकारलाई ध्यानमा राख्दै सामान्यहरू 33,0 6,2.०% घटे, जबकि संक्षिप्तमा XNUMX.२% ले वृद्धि भयो।
पहिलो क्वाटरमा १,1.648 दिवालिया debणीहरू मध्ये, १,१1.147 कम्पनीहरू हुन् (व्यवसाय गतिविधि भएका व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिहरू) र activity०१ व्यक्ति बिना व्यवसाय गतिविधि, जसले 501 .69,6 ..30,4% र .4,0०..2019% प्रतिनिधित्व गर्दछ, कुल torsणीहरू। दिवालिया कम्पनीहरूको संख्या गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा २०१ 81,0 को पहिलो त्रैमासिकमा 32,9.०% ले वृद्धि भयो। कानूनी फारमका अनुसार, bank१.०% कम्पनीहरू दिवालिया भएका घोषित सीमित देयता कम्पनीहरू हुन्। दिवालिया घोषित कम्पनीहरूको .250.000२.।% कम्पनिहरु व्यवसाय स volume्ख्याको सब भन्दा तल्लो खण्ड (२ XNUMX,००० युरो सम्म) मा छन् र मुख्यतया सीमित देयता कम्पनीहरू हुन्।
1 थोरै कामदारहरूको साथ णी कम्पनीहरू
2 प्रभावित स्टक कम्पनीहरू
3 दिवालिया प्रक्रिया कसरी विकसित हुन्छ?
थोरै कामदारहरूको साथ णी कम्पनीहरू
आईएनईले बनाएको आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार २rupt.१% कम्पनीहरूले वाणिज्यलाई उनीहरूको मुख्य आर्थिक गतिविधिका रूपमा र १ 26,1.१% बाँकी सेवा भने। कर्मचारीहरूको स Regarding्ख्याको सन्दर्भमा, rupt.14,1.२% कूल कम्पनीहरूले दिवालिया घोषित गरेका छ भन्दा कम छ। र यी मध्ये, २ .53,2 .२% का कुनै कर्मचारी छैन। पहिलो त्रैमासिकमा कम्पनीहरूको कूल संख्याको २२.२% दिवालिया घोषित भयो २० वा अधिक वर्ष पुरानो हो। तिनीहरूको अंशका लागि, २२..22,8% चार वा कम उमेरका छन्। २ or..28,4% कम्पनीहरूले चार वा सो भन्दा कम वर्षको पुरानो वस्तुको साथ दिवालिया घोषित गरेका छन्। आंशिक रूपमा, २० वा सोभन्दा बढी वर्ष वरिष्ठता भएका senior senior..55,3% ब्यापार वाणिज्य र उद्योग र ऊर्जामा समर्पित छन्, सरकारी रिपोर्ट अनुसार।
क्याटालोनिया र म्याड्रिडको समुदाय सबै torsणीको 47,1 XNUMX.१% को लागि खाता छ २०१ 2019 को पहिलो त्रैमासिकमा दिवालियापन। यसको विपरित, एक्स्ट्रेमादुराले पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सबैभन्दा ठूलो वार्षिक गिरावट (-42,1२.१%) प्रस्तुत गर्यो र इलेस बालेरसको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि (.92,6 २..2019%) रहेको राष्ट्रिय संस्थानको पछिल्लो तथ्यांकले देखायो। तथ्याistics्क (INE) यस आधिकारिक रिपोर्टमा खुलासा भएको सबैभन्दा सान्दर्भिक डाटाको तथ्या .्कमा रहन्छ कि २०१ in मा त्रैमासिक दर १०.10,7% छ, यो मानिएको अवधि सबैभन्दा उच्च हो।
प्रभावित स्टक कम्पनीहरू
अर्को डाटाले संकेत गर्छ कि स्पेनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थानको न्यायिक र फोरेंसिक अडिटर्स (RAJ) को रजिस्ट्री अनुसार, स्पेनमा bank ०% दिवालिया कार्यवाही तरलतामा समाप्त हुन्छ। जबकि यसको विपरितमा, करीव 70०% निष्कर्षमा पुग्छ किनकि त्यहाँ कम्पनीहरूमा पर्याप्त सम्पत्तिहरू छैनन् जुन तरल गर्न सकिन्छ। लेनदारहरुलाई भुक्तान सामना गर्न को क्रम मा। एक प्रक्रियामा जुन धेरै जटिल बन्न सक्छ र त्यसका लागि पेशेवरहरू राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जुन यस नियमन गरिएको न्यायिक प्रक्रियाको व्युत्पन्नतालाई कसरी प्रभाव पार्दछ भनेर कसरी कार्यहरू चैनल गर्ने भनेर जान्दछन्।
जे भए पनि, यो जान्न सजिलो छ कि यी केसहरूमा के गर्नुपर्नेछ किनभने कुनै त्रुटि दिवालियापनले असर गर्ने कम्पनीहरूलाई अत्यन्तै महँगो पर्न सक्छ। जहाँ यो बिर्सिदैन कि केहि कम्पनीहरु जुन सूचीबद्ध गरीएको छ वा मुख्य स्पेनिश इक्विटी सूचका listed्कमा सूचीबद्ध हुन जारी छ यस अवस्थाको माध्यमबाट आएको छ। सबै भन्दा राम्रो ज्ञात केसमध्ये एक त्यस्तो भएको छ स्न्यास त्यो धेरै वर्ष पहिले व्यापार रोक्न र त्यसपछि वित्तीय बजार मा यसको बाटो पुनः सुरु। ताकि यो क्षणमा यो प्रति शेयर ०.२० युरो भन्दा माथि कारोबार गर्दैछ र जहाँ साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूले धेरै यूरो मार्गमा छोडेका छन्।
दिवालिया प्रक्रिया कसरी विकसित हुन्छ?
लिनु पर्ने पहिलो कदमहरू एक घोषणा आदेशको प्रस्तुतीकरण हो र त्यो औपचारिक हो वाणिज्य अदालत अगाडि प्रान्तको जहाँ debणीको व्यापारको दर्ता कार्यालय छ। यो मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो किन प्रभावितहरूलाई एक वकिल र वकीलको उपस्थिति हुनुपर्दछ। किनभने दिवालियापन प्रक्रिया एक दिशा वा अर्को दिशामा चल्न सकिन्छ र जुन कम्पनीलाई के हुन सक्दछ त्यसमा निर्भर गर्दछ। एकातिर, कि एक सम्झौता प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा शुरू हुन्छ। यसको मतलब के हो? ठिक छ, कम्पनी अझै पनि व्यवसायमा छ, किनकि अहिले सम्म यो छ। हद सम्म यो यसको निर्देशक वा व्यवस्थापन निकाय कायम गर्दछ।
अर्को तर्फ, प्रतियोगिता खोल्न सकिन्छ, तर यस अवस्थामा कम्पनी को तरलता। जुन केसमा, तिनीहरूको गतिविधिहरू बन्द हुने थियो। जहाँ बैंकरप्सी प्रशासकको आंकडा लेनदारहरुलाई payण तिर्नको लागि व्यापार तरलताको चार्ज मा हुनेछ। सामाजिक प्रशासन निकाय जस्तै, तिनीहरू प्रशासक द्वारा प्रतिस्थापित हुनेछ। अर्को शब्दमा, प्रक्रियात्मक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापनमा एक वा अर्को मोडेलको लागि छनौट गर्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्। र यो के हो यो कानूनी आंकडा मार्फत यस अपरेशन को सफलता निर्धारित गर्दछ।
लिनु पर्ने पहिलो कदमहरू एक घोषणा आदेशको प्रस्तुतीकरण हो र त्यो औपचारिक हो वाणिज्य अदालत अगाडि प्रान्तको जहाँ debणीको व्यापार मुख्यालय छ। यो मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो किन प्रभावितहरूलाई एक वकिल र वकीलको उपस्थिति हुनुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » दिवालियापन: torणी कम्पनीहरूको वृद्धि १.1,7%